Site na France rue Switzerland, 7 tụrụ agwa okike, ọdọ mmiri ndị dị jụụ, na enchanted castles na-eche ka ha bụrụ akụkụ nke foto foto gị nke ezumike kachasị echefu echefu na Europe. Ya mere, jikere ma kwado i buru naanị ncheta na akụkọ, ka ị na-abanye na njem ọhụụ, ma mee ka ụzọ ndị a na-agabeghị.
Nwere ike ịme ntọala gị n'isi obodo pink na ịma mma, Toulouse, ma ọ bụ obodo ọma nke Albi. Ha abụọ dị ebube maka ụzọ a kụrụ akụ imebi obodo na France na ogologo njem na Ememe French. Nwere ike iru Toulouse mfe ma nwee nkasi obi site na njem ụgbọ oloko site na Paris na Barcelona n'ihe dị ka 5 awa.
Obodo Hallstatt bụ obodo zuru oke nke eserese dị na Lake Hallstatt. N’oge opupu ihe ubi, ịda, ma ọ bụ n’oge oyi, ọ bụ paradaịs zuru oke n’oge ọ bụla n'afọ, na-enye ọtụtụ ihe a na-eme n'èzí maka ndị njem na-anụ ọkụ n'obi nke adrenaline. Ma ọ bụ na ntụle, ọ bụrụ na ị na-arọ nrọ ị aụ mmanya site n'osimiri na iko mmanya ma ọ bụ n'ụgbọ mmiri gburugburu ọdọ mmiri, Hallstatt bu ezigbo ebe njedebe.
ikwubi, a bụ obodo a na-akụ akụ obodo ihe zoro ezo na Europe’s loveliest mba na kpam kpam kwesịrị a nleta!
Nnukwu nchekwa ọzọ dị na mpụga bụ Kladska Nature idobere. There’s a beautiful trail to the lake, ọ bụkwa ihe ịtụnanya na ọdịda. ma, ma ọ bụrụ na ị na-ahọrọ obere obodo na chateaux, mgbe ahụ ị ga-ahụ Neo-Gothic n'anya Hluboka Chateau.
Ọmarịcha Lucerne ezigbo base ụbọchị njem na Alps, achọpụtabeghị ndị njem. Yabụ ị ga - enweta ohere dị oke ọnụ iji nwee ọ itụ na inyocha Switzerland site n'okporo ụzọ amia. Soro uzo Dragọn a nwalee ike gị na ogige udo, nke abụrụ ihe omume dị mma na-aga gburugburu Lucerne.
You chọrọ itinye mgbagha blọọgụ anyị “7 Off the Beaten Path Destinations in Europe” na saịtị gị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Foff-beaten-path-destinations-europe%2F%3Flang%3Dig የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Antwerp citybreakeurope offbeatenpath offthebeatenpath Train Travel travelaustria traintravelfrance travelitaly travelswitzerland